Hutano, 01 Chikunguru 2019
Hurumende Inokurudzirwa Kurwisa Nesimba Zvirwere Zvepfungwa
Nyanzvi munezve zvirwere zvepfungwa, Doctor Sthembile Mahlatini, vanoti havasi kufara nezvavari kuona muZimbabwe maererano nekurapwa kwezvirwere zvepfungwa.
Mumwe chiremba anoona nezvehutano hwemadzimai akazvitakura, Dr Misheck Gororo avo vanoshanda kuUnited Bulawayo Hospitals, vari kukurudzira varume kuti vaddzidzewo nezvenyaya dzezvirwere zvepabonde
Bato reZimbabwe African People’s Union, ZAPU, rakaita musangano waro we National People’s Council muBulawayo pakupera kwesvondo rikabvumirana kuti vaimbove mutevedzeri wemuchakabvu Dumiso Dabengwa , vaIsaac Mabuka, vatungamirire bato iri kusvika kwaitwa musangano wekongiresi gore rinouya.
Sangano Remakereke Ratingidza Misangano Nemadzishe Edunhu reMatebeleland North
Sangano remakereke, reZimbabwe Council of Churches, ZCC, ririkuita misangano nemadzishe nevagari vemumatunhu eMatebeleland vachitsvaka nekukurudzira nhaurirano pamwe chete nekugadzira nzira yekuti kusagarisana kwakaitika kare kukurukurwe pachena.
Bazi rezvehutano rakaparura mushonga mutsva uchapiwa vanhu vari kurarama nehutachiwana hweHIV unonzi Dolutegravir kana kuti DTG muchidimbu.
Varairidzi Vanoti Vacharamwa Mabasa Kutanga Mangwana Chipiri Kusvika Musi weChishanu
Sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, rinoti nhengo dzaro dzicharamwa mabasa kubva musi weChipiri kusvika musi weChishanu svondo rino.
Musangano Wekubvumirana Mitemo Yekuchengetedzwa KweVanhu Nenzvimbo Dzine Zvicherwa Uri Kuitwa kuCanada
Musangano weGlobal Initiative for Responsible Mining, uyo uri kutsvaka kubvumirana kwenyika pasi pose mirairo yekubatwa kwevanhu vanoita basa rekuchera zvicherwa pamwe chete nenzizi dziri kuparadzwa nekucherwa uku, uri kuitwa muguta re Vancouver ku Canada.